बमको जिम्मा लिएकाे विप्लव समूहले आजदेखि नपड्काउने ! - Everest Dainik - News from Nepal
बमको जिम्मा लिएकाे विप्लव समूहले आजदेखि नपड्काउने !
काठमाडौं, मंसिर २२ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले चुनावका क्रममा भएका बम विष्फोटका घटनाको जिम्मेवारी लिँदै आजबाट बम हमला रोकिने जनाएको छ । बम बिष्फोटनलाई प्रतिरोधका घटना भन्दै सो पार्टीले मतदान सकिएपछि बम बिष्फोटनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने जनाएको हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले भने– ‘देशभर प्रतिरोधका घटना हाम्रो नेतृत्वमा भएका हुन्, चुनाव खारेजी अभियानको नेतृत्व हामीले गरेको हुनाले सबै घटनाको जिम्मा हामी लिन्छौं ।’
याे पनि पढ्नुस प्रहरी र विप्लपका कार्यकर्ताबीच दोहोरो झडप
याे पनि पढ्नुस अपडेट : विप्लवको बन्द - काठमाडौंमा सामान्य प्रभाव, अन्यत्र सुनसान